Virus & Protection E-Book...! | အိမ်လွမ်းသူ...
ကျွန်တော် ဒီတစ်ခါ Virus Protection စာအုပ်လေး တင်ပေးလိုက်ပါတယ်...! Virus အကြောင်း လေ့လာချင်တဲ့ သူတွေ အတွက် အသုံးဝင်တဲ့ စာအုပ်လေးပါ...! စာအုပ်တွေကို သူငယ်ချင်းတို့ သိမ်းထားစေချင်ပါတယ်...! ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် အထောက်ကူပြုပါတယ်...! စာရေး ဆရာကတော့ သန်းထိုက်(ရွှေရိပ်..) ပါ...! ကျွန်တော် PDF ဖိုင်လေးနဲ့ပါ တင်ပေးထားပါတယ်...!ဖက်ကြည့်လို့ စိတ်ဝင်စားတယ်ဆိုရင် အောက်မှာ Mediafire လေးဖြင့် တင်ပေးထားပါတယ်...!
" ဒီမှာယူသွားပါ..." ( 16 MB )
No Response to "Virus & Protection E-Book...!"